Budada Studio Beats Waxay Helaan Shahaadada FCC | Waxaan ka socdaa mac
Beats Studio Buds waxay helayaan shahaadada FCC
Tani waa daadad soo ifbaxaya oo run noqon kara sida ugu dhaqsaha badan oo inbadan oo naga mid ah laga yaabo inay u maleeyaan waxayna umuuqataa inay dhagaha dhagaha cusub Studio Buds, oo ka socda shirkadda Beats, wuxuu horey u gudbin lahaa oggolaanshaha FFC.
Aynu xusuusano dhagahaas ayaa lagu ogaadey nooca beta ee iOS 14.6 RC (Siideynta Musharaxa) markii dambena warbaahinta takhasuska leh ee Apple ayaa goor dhow soo daabacday wararka ku saabsan. Xaaladdan oo kale caddaynta waxaa ogaaday dadka MyHealthyApple iyo goor dambe 9To5Mac ayuu ku daabacay degelkiisa.
Caqli ahaan shahaadadan ayaa la ansixiyay Ma tilmaamayso cabirka, nashqadda ama wax astaamo farsamo ah oo ku saabsan sameecadaha dhagaha ee cusub ee shirkadda Beats. Si fudud ayey u tahay shahaado ay sameecadaha dhagahoodu ku dhowaan karaan inay bilaabaan.
Sida dhagaha kale ee sameecadaha ee ka socda shirkadda dalladda Apple waa macquul in kuwani si lama filaan ah uga soo muuqdaan websaydhka shirkadda Cupertino iyadoo aan loo baahnayn soo bandhig rasmi ah. Qalabka cusub ee loo yaqaan 'Beats Studio Buds' ayaa sidoo kale soo bandhigi doona barnaamijka 'Apple's chip' si uu u bixiyo isku dheelitirnaan deg deg ah oo ay weheliso muuqaalka "Hey Siri". Marka loo barbardhigo Powerbeats Pro-ka hadda jira, dhagaha dhagaha ee cusub ee 'Beats' waxay noqon doonaan kuwo aad u tiro yar oo isle'eg.
Qiimaha ay ku furan karaan dhagaha dhagaha cusub 'Beats' ma cadda, laakiin xisaabta ku darso in Powerbeats Pro lagu qiimeeyo 249,95 euro dalkeena, Studio Buds-kan cusub waa inuu yara yaraadaa ... Waan arki doonaa waxa dhaca dhamaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Beats Studio Buds waxay helayaan shahaadada FCC
Michelle MacLaren, Elisabeth Moss iyo Daina Reid si ay u jiheeyaan dhamaan 8da dhacdo ee Gabdhaha ifaya ee Apple TV +
Apple wuxuu muujiyaa astaamaha cusub ee Kaararka Qoyska ee horeyba u shaqeynayay